Arsenal Oo Ka Hadashay Safarka Uu Aubameyang Maanta Ku Tegay Barcelona - GOOL24.NET
Arsenal Oo Ka Hadashay Safarka Uu Aubameyang Maanta Ku Tegay Barcelona
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa si adag uga hadashay safarka uu weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang uu maanta ku tegay magaalada Barcelona, halkaas oo gellinkii hore uu gaadhay.
Laacibkan ayaa lagu sawiray isaga oo ka degay garoonka diyaaraha oo baabuur kaga sii baxaya garoonka, waxaanay warbaahinta Spain soo wariyeen inuu heshiis amaah ah ugu wareegayo Barcelona oo uu tijaabada caafimaadka u marayo.
Laakiin Arsenal ayaa wax lala yaabo ku tilmaantay in laacibkani uu fasax la’aan ku tegay Barcelona, waxaanay meesha ka saartay inuu jiro wax heshiis ah oo ay la gaadhay kooxda reer Spain oo Auameyang uu kaga mid noqonayo naadigaas.
32 jirkan ayaa maanta shaki la geliyey sida ay Barcelona ku bixin karayso mushaharkiisa xad-dhaafka ah ee toddobaadkii uu ka qaato Arsenal oo ah £350,000 Gini, hase yeeshee waxay wararka gellinkii hore tibaaxayeen in labada kooxood ay arrintaas ka wada hadleen oo ay koox ba badh bixinayso.
Sida uu qoray wargeyska The Sun, fasax la’aanta uu Aubameyang ku tegay Barcelona ayaa sii kala fogeyn doonta labada kooxood.
Sky Sports ayaa sheegtay in Aubameyang uu si aad ah u doonayo inuu tago Barcelona oo uu xataa diyaar u yahay inuu ka tanaasulo qaybo ka mid ah mushaharkiisa, si ay suurtogal ugu noqoto inuu tago Camp Nou.
Idaacadda Cadena Ser ee Spain fadhigeedu yahay ayaa waxay iyaduna sheegtay inAubameyang uu tijaabada caafimaadka marayo maanta oo Isniin ah ka hor intii aanay Arsenal ka hadal arrintan.
Si kastaba, Suuqa iibka ciyaartoyda oo xidhmi doona saqda dhexe ee caawa ayaa shaki la gelinayaa in uu Aubameyang ka ku biiri doono Barcelona, soona afjari doono waqtigii adkaa ee uu ku qaatay Arsenal oo kulamadii ugu dambeeyey uu Mikel Arteta ka saaray liiskiisa, isaga oo ka qaaday kabtanimadiina.